> Resource> iPhone> Olee otú iji ele iPhone Kọntaktị na Computer
Olee otú m nwere ele m iPhone kọntaktsị na kọmputa?
My iPhone furu efu. Achọrọ m azụ m kọntaktị na ya na achọpụtara m na m na-synced m iPhone na iTunes n'ihu. Bụ n'ebe ọ bụla ụzọ ozugbo ele iPhone kọntaktsị na kọmputa? M mkpa ha ngwa ngwa.
General ekwu okwu, iTunes site ndabere faịlụ maka Apple ngwaọrụ akpaghị aka mgbe ị mmekọrịta gị na ngwaọrụ na ya. Otú ọ dị, iTunes ndabere faịlụ bụ unreadable, nke pụtara na ị pụrụ nwetaghị ya, ma ọ bụ na-ọdịnaya ọ bụla n'ime ya. Ele kọntaktị gị na kọmputa, mkpa ka ị wepụ nkwado ndabere na mpaghara faịlụ, ma ọ bụ nanị kpọmkwem iṅomi gị iPhone ịzọpụta kọntaktị dị ka a ogugu faịlụ, ọ bụrụ na gị iPhone bụ ka na aka.
N'agbanyeghị na ị nwere gị iPhone na aka ma ọ bụ, ị pụrụ inwe iPhone kọntaktị extractor ngwá ọrụ ebe a: Wondershare Dr.Fone maka iOS (Mac iPhone Data Recovery) ma ọ bụ Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone Data Recovery) (Windows) (akwado iOS 9). Nke a software nwere ike inyere wepụ gị iTunes ndabere ịzọpụta kọntaktị dị ka a ogugu faịlụ na kọmputa gị, ma ọ bụ i nwere ike iji ya ozugbo iṅomi gị iPhone maka kọntaktị na-azọpụta ya. Ma ụzọ na-arụ ọrụ dị ukwuu.
Download a free ikpe n'okpuru na wụnye ya na kọmputa gị.
Ebe a ka na-agbalị ya na Mac version nke Wondershare Dr.Fone. Ọ bụrụ na ị a Windows onye ọrụ, ọ na-adịghị mkpa. I nwekwara ike ile yiri nzọụkwụ dị ka ndị a na-ele gị iPhone kọntaktsị na PC.
Ihe ngwọta howo ele iPhone kọntaktsị na Mac (PC)
Ke akpan window nke Wondershare Dr.Fone maka iOS (Mac), e nwere ọtụtụ ngwaọrụ ụdị maka gị nhọrọ. Họrọ onye nke gị.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ele iPhone kọntaktị site na nkwado ndabere na mpaghara, ị nwere ike họrọ onye mbụ: Naghachi si iTunes ndabere File. Ọ bụrụ na ị nwere gị iPhone na aka na-adịghị nwere ndabere faịlụ, ị nwere ike họrọ onye nke ọzọ na-kpọmkwem iṅomi gị iPhone. Ma ụzọ ka ị na-ele iPhone kọntaktị na kọmputa gị.
Nzọụkwụ 3. iṅomi gị iPhone kọntaktị
Naputa site na iTunes ndabere File: Ọ bụrụ na ị na-ahọrọ otú a, ị ga-enweta nkwado ndabere na mpaghara faịlụ na kọmputa gị. Họrọ ya na pịa "Malite iṅomi" mee ka gị na kọntaktị ogugu.
Naputa site na iOS Ngwaọrụ: Ọ bụrụ na ị na-ahọrọ otú a, jikọọ gị iPhone na kọmputa na-eso nkọwa na window ịbanye iPhone si scanning mode na ike iṅomi gị iPhone.
N'ihi na iPhone 4 / 3GS:
N'ihi na iPhone 6S Plus, iPhone 6S, iPhone 6 Plus, iPhone 6/5 / 4S:
Nzọụkwụ 4. Save ma na-ele iPhone kọntaktsị na kọmputa
N'agbanyeghị nke ụzọ ị na họọrọ, ị ga-enweta a Doppler akụkọ n'okpuru. Ebe i nwere ike ihuchalu niile data na ya. N'ihi na ị na kọntaktị, ego ya na pịa "Naghachi". I nwere ike ịzọpụta ya na HTML, CSV ma ọ bụ VCF. Họrọ onye ị na-ahọrọ, na i nwere ike na-ele gị iPhone kọntaktsị na kọmputa ugbu a.
Olee otú ele iPhone Ozi na Mac ma ọ bụ PC
2 ụzọ nyefee faịlụ site na PC na-iPhone
Olee otú Jiri Your iPhone ka Were HDR Photos
General Nhọrọ ịrụzi Your Tiwara Etiwa iPhone
Nyefee Ndi ana-akpo si iPhone ka Moto X na 1 Pịa